အဖွင့် ဖိုရမ် သတင်းနှင့်အင်တာဗျူးများသတင်းများ ဒဏ်ရာသတင်းများ အင်တာဗျူးများ ဆောင်းပါးပွဲကြိုသုံးသပ်ချက် ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက် အထွေထွေဆောင်းပါး မှတ်တမ်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (ဟိုက်လိုက်) မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ပွဲစဉ်များ ပထမအသင်းကစားသမားများ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်များ အထွေထွေAM ခန့် မှန်းပြိုင်ပွဲ AM ခန့်မှန်း ပြိုင်ပွဲ ဇယား Fan Club အင်တာဗျူးများ ကျွန်တော့်ဂိုးဟာ အသင်းသားတွေအားလုံးအတွက်ပါ - LK	Arsenalmyanmar	တနင်္ဂနွေနေ့က ကစားခဲ့သော ဝက်စ်ဘရွန်းနှင့်ပွဲစဉ်တွင် တစ်ဖက် နှစ်ဂိုးစီသရေကျနေချိန်၌ အနိုင်သေချာစေမည့် အဖိုးတန်ဂိုးကို သွင်းယူပေးခဲ့သူ လောရန့် ကိုစီယယ်နီမှ ယင်းဂိုးသည် အာဆင်နယ် တစ်သင်းလုံးနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်း ဖွင့်ဟပြောကြားလိုက်သည်။ ပွဲချိန် ၅၄ မိနစ်တွင် ရရှိခဲ့သော ထောင့်ကန်ဘောအား အသင်းခေါင်းဆောင် ဗန်ပါစီမှ ကန်တင်ပေးရာ တစ်ဖက် အသင်းဂိုးသမား၏ အမှားကြောင့် ရရှိလာသော ဘောလုံးအား ပြင်သစ်သား ကသွင်းယူပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အာဆင်ဝင်းဂါး၏ အပြောင်းအရွှေ့နှင့် ပွဲကြို ပြောစကားများ	Gu Ru	အာဆင်နယ် အသင်းသည် ယခုနွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့တွင် ကိုလုံးအသင်းမှ တိုက်စစ်မှုး ပိုလ်ဒေါလ်စကီးကို ပေါင်ဆယ်သန်းဖြင့် ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ပြင်သစ် ကွင်းလယ်လူ M’Vila ကို မြင့်မားသော ပြောင်းရွှေ့ကြေးဖြင့် ခေါ်ယူခဲ့သည် ဟူသော သတင်းများကိုမူ ငြင်းပယ်လိုက်သည်။
ဆိုးလ်ကမ်းဘဲရဲ့ သံယောဇဉ် (သို့) စိတ်ပျက်ဝေဒနာ	soewinger	ပြီးခဲ့သည့် အပါတ်ကဘောလုံးလောကမှအနားယူသွားပြီဖြစ်သော တစ်ချိန်က အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အမာခံကျောက်ဆောင်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခံစစ်မှုကြီး ဆိုးလ်ကမ်းဘဲ ဟာ စနေနေ့က အန်မရိတ်ကွင်းတွင် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့သော အာဆင်နယ် နှင့် နော့ဝှစ်ခ်ျ အသင်းတို့၏ ပွဲစဉ်၌ ၃ဂိုး၃ဂိုး သရေကျခဲ့သည့် ပွဲတွင် အာဆင်နယ်အသင်း၏ နောက်တန်းကစားပုံကို ဝေဖန်ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ထိုပွဲနှင့်ပါတ်သက်၍ ဆိုးလ်ကမ်းဘဲက အခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Read more... Comments (4)
အာဆင်နယ်ရောက် ပိုလ်ဒေါစကီးနှင့် အင်တာဗျူး	Gu Ru	အာဆင်နယ် အသင်းသည် ကာလအတန်ကြာ စောင့်စားခဲ့ရသော ပိုလ်ဒေါစကီး၏ အပြောင်းအရွှေ့ကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ပိုဒေါလ်စကီးသည် ယခုလာမည့် နွေရာသီတွင် အာဆင်နယ် အသင်းသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပြောင်းရွှေ့ကြေးကိုမူ နှစ်သင်းလုံးက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိချေ။ ပိုလ်ဒေါစကီးက ``အာဆင်နယ် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရတာဟာ ဥရောပ အဆင့်မြင့် ဘောလုံးလောကမှာ အတွေ့အကြုံတွေရဖို့ မဟာအခွင့်အရေးတခုပါပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ (အပြောင်းအရွှေ့) ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချခဲ့တာဟာ ကိုလုံးအသင်းကို ဆန့်ကျင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စဟာ တကယ့် မဟာ အခွင့်အရေး တစ်ရပ်ပါ၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အရည်အချင်းကိုလည်း တိုးတက်စေမှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ´´ ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
တိုက်စစ်မှုးအနေနဲ့ ကစားဖို့ သံသယရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ဗန်ပါစီ	Gu Ru	အာဆင်နယ် တိုက်စစ်မှုး ဗန်ပါစီသည် သူ့အနေဖြင့် အဓိကတိုက်စစ်မှုး နေရာကစားရန် အရည်အချင်း ပြည့်ဝလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု သံသယရှိခဲ့ဖူးသည်ဟု ဖွင့်ဟပြောကြားလိုက်သည်။
ယခုရာသီတွင် ဂိုးစုစုပေါင်း လေးဆယ်အထိ သွင်းယူနိုင်လိမ့်မည်ဟု အများကသုံးသပ်နေကြသည်။ ဗန်ပါစီသည် အသင်းနည်းပြ အာဆင်ဝင်းဂါးက ပထမတိုက်စစ်မှုးနေရာကို စတင်ကစားခိုင်းစဉ်က သူ့အနေဖြင့် အောင်မြင်မှုများ ရရှိရန် သံသယရှိခဲ့ဖူးသည်။
" မန်စီးတီးပွဲဟာ ချန်ပီယံ အဆုံးအဖြတ် မဟုတ်သေးပါဘူး " အာဆင်ဝင်းဂါး
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် မသေချာသေးပါဘူး။ အာတေတာ
« Start Prev 1234567 8910 Next End »	Page9of 37	Copyright © 2016 Arsenal Myanmar | All of Arsenal fans from Myanmar.. All Rights Reserved. Originated by Thatoe.